गाइको बाच्छीले नव्याउँदै दूध दिन थालेपछि…! « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
गाइको बाच्छीले नव्याउँदै दूध दिन थालेपछि…!
१३ असार २०७८, आईतबार ००:००
गण्डकी प्रदेश स्थित कास्की जिल्लाको पोखरा महानगरपालिका-२१ फेदीपाटनका मुक्ति पौडेल कात्तिकको अन्तिममा व्याउनुपर्ने गाईले छ महिनाअघि नब्याउँदै दूध दिन थालेपछि दङ्ग हुनुहुन्छ ।
विसं २०७७ माघ २ गते परम्परागत तवरले बहर लगाएर प्रजनन् गराइएको गाई आगामी कात्तिकमा व्याउने भन्दै ढुक्क बनेका पौडेललाई जेठको २६ गते राति एकाएक गाईको थुनबाट दूध गोठमा आफै झरेको देख्दा अचम्भित बन्नुभयो ।
साढे दुई वर्षको मिनिजर्सी सो बाच्छीले त्यसयता प्रत्येक दिन बिहान बेलुका दुई/ दुई लिटरका दरले दूध दिन थालेपछि यतिखेर उहाँको घरमा गाई हेर्न छिमेकीहरु पुग्न थालेका छन् । उहाँले भन्नुभयो, “दूध भने कहिल्यै पनि फाटेन । अहिले खाएर बाँकी रहेको दूध दही बनाएर मोत्था घ्यू पनि राम्रो लाग्ने गरेको छ ।”
नब्याउँदै गाईले दूध दिन थालेपछि दङ्ग परेका निर्मलपोखरी गाविसका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहनु भएका पौडेल र उहाँकी श्रीमती सीतालाई यतिखेर गाई हेर्न आउने छिमेकीलाई गाईका बारे बताउन भ्याइनभ्याइ छ । गोठमा दुई वटा ब्याउने भैंसी भएर पनि गाई पाल्ने इच्छा जागेको कारण आफूले बाच्छीको खोजीमा रहेको बेला स्थानीय दलित समुदायका एक व्यक्तिमामार्फत २०७६ पुस १७ गते ल्याएर गोठमा बाँधिएको हो । वेवारिसे अवस्थाको गाईको बाच्छी ल्याइदिने उनलाई पौडेलले एक हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक समेत दिनुभएको थियो ।
प्रकाशित मिति: Jun 27, 2021
एकै मण्डपमा छोरी र बावु-आमाले विवाह गरेपछि…!
विवाहको प्रचलन देश र ठाउँअनुसार फरक हुने गर्दछ । प्रत्येक देशमा विवाहको आ-आफ्नै किसिमको परम्परा
जुम मिटिङमा पत्नीले पतिलाई चुम्बन गर्न खोजेको भिडियो भयो भाइरल !
अहिलेको समयमा कोरोना महामारीले गर्दा धेरै देशका मानिसहरु घरबाटै काम गरीरहेका छन् । घरबाटै काम
६० वर्षका बृद्ध दोस्रो विवाह गर्न माग गर्दै बिजुलीको पोलमा चढेपछि…!
यो संसारमा मानिसको स्वभाव पनि फरक फरक हुने गर्छ । मानिस कस्तो संस्कृतिबाट हुर्केको छ
किन मानिसहरु रक्सीको नशामा अंग्रजी बोल्छन् ? यस्तो छ कारण !
अहिलेको समाजमा मौलाउँदै गएको सबैभन्दा नशा भनेको रक्सी हो । रक्सी अहिलेको समाजमा फेसन जस्तो